Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » El Al malitegharịrị ụgbọ elu Budapest na ụgbọ elu Tel Aviv
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Hungary na -agbasa akụkọ • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Na-emepe njikọ ya n'etiti Budapest na Tel Aviv taa, El Al ga-arụ ọrụ ugboro anọ kwa izu na mpaghara 2,165km.
El Al laghachiri n'ọdụ ụgbọ elu Budapest.
Onye na -ebu ọkọlọtọ Israel maliteghachiri ọrụ Tel Aviv na Budapest.
Ụgbọ elu Budapest-Tel Aviv ga-arụ ọrụ ugboro anọ kwa izu.
Maliteghachi ụzọ ụgbọ elu Budapest Airport na -aga n'ihu na nloghachi nke onye ọrụ ụgbọ elu Hungarian, El Al Airlines.
Mweghachi njikọ na Tel Aviv, onye na -ebu ọkọlọtọ Israel ga -agbasawanye ọrụ ọdụ ụgbọ elu na mba Middle East.
Na-emepe njikọ ya n'etiti Budapest na obodo dị n'ụsọ oké osimiri Mediterenian taa, onye na-ebu ụgbọ ga-arụ ọrụ ugboro anọ kwa izu na mpaghara 2,165km.
Balázs Bogáts, Onye isi mmepe ụgbọ elu, Ọdụ ụgbọ elu Budapest kwuru, sị: “Obi dị anyị ụtọ ịhụ El Al nloghachi - Budapest bụ otu n'ime ebe ndị njem Israel na -aga, yabụ anyị maara na ọrụ a ga -adị oke mkpa. Budapest nwere nnukwu obodo ndị Juu na, n'ezie, nnukwu ụlọ nzukọ nke Budapest bụ ụlọ nzukọ nke abụọ kacha ibu n'ụwa. Ya mere, anyị nwere obi ike na ịmaliteghachi ọrụ El Al site na Tel Aviv ga -amasị ma ndị njem ma ndị njem na -eleta ndị enyi na ndị ikwu. ”
El Al Israel Airlines Ltd. bụ onye na -ebu ọkọlọtọ nke Israel. Ebe ọ bụ na ụgbọ elu mmalite ya sitere na Geneva gaa Tel Aviv na Septemba 1948, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ahụ etoola ije ozi ihe karịrị ebe 50, na -arụ ọrụ ụlọ na nke mba ụwa ahaziri iche na ụgbọ elu ibu n'ime Israel, yana Europe, Middle East, America, Africa, na Far East, site na isi ya na Ben. Ọdụ ụgbọ elu Gurion.